Videogiochi gụgharia na Cloud Gaming di Stadia, Geforce Ugbu a, PlayStation Now 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Videogiochi gụgharia na Cloud Gaming di Stadia, Geforce Ugbu a, Playstation Ugbu a
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, iji kpọọ aha egwuregwu vidio kachasị amasị gị, ị ga-azụta ihe egwuregwu ma ọ bụ setịpụ PC dị oke ọnụ, ma soro ihe osise na-arịwanye elu, anyị ga-emelite kọmputa ahụ ma ọ bụ zụta ọhụrụ. console odika ọ bụla 3-4 afọ. Mana njikọ Internetntanetị dị ọsọ ọsọ, usoro ọhụrụ nke igwu egwuregwu vidio amalitela ijide: the egwuregwu ojii.
Echiche nke igwe ojii adịghị iche na egwuregwu ndị a ma ama n'ịntanetị achọpụtara na Internetntanetị, na ọdịiche dị na site na nyiwe igwe ojii ndị a ọ ga-ekwe omume taa. kpọọ ọbụna egwuregwu vidio kachasị elu (dị ka CyberPunk 2077), nke na-achọ PC na kaadi eserese raara onwe ya nye ma ọ bụ njikwa dị ka PlayStation 4 ma ọ bụ 5. Ọbụna iji PC nkịtị na enweghị ịzụta ngwaọrụ ọ bụla pụrụ icheYa mere, enwere ike igwu ya n'enweghị ihe mgbochi na ogo dị elu, ebe ọ bụ na akụ dị mkpa iji gbaa egwuregwu ahụ site n'aka ndị sava dịpụrụ adịpụ, nke anyị jikọtara na thentanetị iji nata ụda egwuregwu / vidiyo egwuregwu ahụ ma zipụ ntinye iwu.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ga-egosi gị esi egwu n'egwu na-enweghị njikwa ma ọ bụ PC egwuregwu na-eji ọrụ igwe ojii na-arụ ọrụ n'availabletali ma dị mfe ịnweta ọbụlagodi na njikọ thatntanetị na-anaghị arụ ọrụ karịsịa (n'ụzọ doro anya, anyị ga-ezere iji nwayọọ nwayọọ njikọ ma ọ bụ njikọ ADSL, ugbu a ekwesighi ka ọtụtụ ọrụ enyere ụgbụ).
G ALKWUO: Etu esi egwu egwuregwu PC na TV
Otu esi egwu egwuregwu igwe ojii
Dị ka e kwuru na mmeghe, anyị nwere ike igwu naanị n'igwe ojii ma ọ bụrụ na anyị nwere njikọ ịntanetị pụrụ iche - na ihe niile ọrụ niile bụ naanị ihe achọrọ (ewezuga GeForce Ugbu a) dị ka ihe na-eme na ihuenyo anyị bụ mmiri jikọtara ọnụ ọ nwere ike ijikwa PC ọ bụla ọbụlagodi afọ 7 ma ọ bụ karịa na ubu ya. Mgbe anyị hụsịrị ihe achọrọ, anyị ga-egosi gị ọrụ ndị ị nwere ike iji na fortali maka egwuregwu igwe ojii yana ngwa ndị ọ ga - adị mma iji mee ka ahụmịhe egwuregwu zuru oke.
Sistem na netwọkụ chọrọ
Maka igwe ojii, anyị chọrọ ntanetị intaneti na ndenye aha dị larịị (yabụ enweghị ndebanye ụgwọ-ma ọ bụ njikọ ikuku) nwere ike ime ihe ndị a:
Budata ọsọ: ọ dịkarịa ala megabits 15 kwa nkeji (15 Mbps)
Bulite ọsọ: ọ dịkarịa ala megabits 2 kwa nkeji (2 Mbps)
Ikpo: ihe na-erughị 100 ms
Iji nweta nsonaazụ kachasị mma, anyị na-ezere iji njikọ Wi-Fi n'etiti PC na modem ma họrọ njikọ njikọ Ethernet: ọ bụrụ na mọdem ahụ tere aka na PC anyị chọrọ igwu, anyị nwere ikema ọ bụ nzọ na Njikọ njikọ Powerline ma ọ bụ na 5 GHz Wi-Fi na-emeghachi iji melite nkwụsi ike na njikọ njikọ. Iji nwalee njikọ intaneti nke ụlọ gị wee chọpụta ma ọ kwesịrị ekwesị maka egwuregwu igwe ojii, anyị na-akwado ka ị gbaa ọsọ ọsọ na isiokwu anyị "ADSL na Fiber Test: Kedu ka esi atụ ọsọ Internetntanetị?",, ebe o zuru iji pịgharịa gaa na ibe ahụ wee pịa bọtịnụ mmalite nnwale iji mara ozugbo ma ọ bụrụ na anyị emee ihe ndị achọrọ dị n'elu.
Egwuregwu ojii dị na .tali
Ọ bụrụ na njikọ Internetntanetị anyị zuru oke iji rie egwuregwu ojii, anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti ọtụtụ ọrụ ịmalite igwu egwu n'ịntanetị ozugbo na-enweghị njikwa na enweghị PC egwuregwu.
Ọrụ mbụ anyị na-akwado ka ị gbalịa bụ Google Stadia, nwere ike ịnweta site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na-arụ ọrụ na ihe nchọgharị Google Chrome (nke a ga-etinye na kọmputa anyị).
Site na ọrụ a, o zuru ezu ịnweta akaụntụ Google ma denye aha na ndebanye aha ọnwa nke .9,99 XNUMX iji kpọọ ọtụtụ egwuregwu ozugbo, ọbụlagodi ndị na-adịbeghị anya, nwere oke nnyefe dị elu na nzaghachi iwu na ọkwa kachasị elu ( ekele nke sava raara onwe ya nye Google).
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwebata Google Stadia n'ime ime ụlọ ma kpọọ egwuregwu na TV, anyị nwere ike ịtụle ịzụta ngwugwu Stadia Premiere Edition, nke na-enye a stadia wifi njikwa bụ a Chromecast Ultra igwu igwe ojii na TV ọ bụla.
IHE: Ọ bụrụ na ị chọrọ nwaa Stadia n'efu ma chọpụta na njikọ ịntanetị gị dị ọsọ ọsọ iji zụlite egwuregwu vidio, ị nwere ike ịme ya na-enweghị inye kaadị akwụmụgwọ. Onlykwesịrị ịdebanye aha maka akaụntụ nnwale na tupu ịmechaa aha ahụ, jiri nhọrọ ahụ nwalee ọrụ ahụ maka nkeji 30. Na-esote, kwuo otu n'ime egwuregwu efu nke Stadia Pro nyere wee bido igwu egwu iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma na PC gị.
Ọrụ ọzọ anyị nwere ike iji maka egwuregwu ojii bụ GeForce UGBU A, nke NVIDIA na-arụ ọrụ ma dị na weebụsaịtị.
Site na ịdenye aha na ọrụ ahụ na ibudata ngwa a kapịrị ọnụ na ngwaọrụ anyị, anyị ga-enwe ike igwu egwu n'efu na-enweghị oke maka otu awa kwa ụbọchị, mana site na ịnweta ohere (anyị ga-achọta ebe n'efu na sava ahụ); Iji kpọọ egwuregwu niile ozugbo, na-enweghị ichere ma jiri ogo dị elu (yana mmalite nke NVIDIA Ray Tracing), naanị denye aha na ndenye aha maka .27,45 6, nke a ga-akwụ kwa ọnwa isii ọ bụla. Iji nwee ike igwu egwu enwerekwa obere ihe achọrọ maka PC eji, ebe ọ bụ na ngwa ahụ na-eji akụkụ opekempe nke usoro ihe eji arụ ọrụ: iji kpọọ nke ọma ọ zuru ezu ịnweta PC na 4GB RAM na kaadị vidiyo na-akwado DirectX 11 , dị ka a hụrụ na ibe akwụkwọ iwu. Iji kpọọ elekere ozugbo, anyị nwere ike ịtụle iji NVIDIA SHIELD TV, HDMI dongle dị njikere iji ya na egwuregwu ojii ma dị na Amazon maka ihe na-erughị € 200.
Ezigbo ọrụ ọzọ anyị nwere ike ịnwale maka egwuregwu igwe ojii bụ PlayStation ugbu a, nke Sony nyere ma nweta ya na weebụsaịtị.
Site na ọrụ a anyị nwere ike igwu aha ndị dị na PS4 na PS5 sitere na PC, ihe niile anyị ga - eme bụ ibudata ngwa a kapịrị ọnụ maka Windows PC, banye na akaụntụ Sony ma kwụọ ụgwọ ọnwa kwa ọnwa (€ 9,99 kwa ọnwa). Ọ bụrụ na anyị chọrọ igwu igwe ojii na ime ụlọ dị n'ihu TV, anyị nwere ike iji PS nke ọma na PS4 Pro ma ọ bụ PS5, zere ịzụrụ egwuregwu na igwu egwu Online na ogo kachasị elu.
G ALKWUO: Ihe kacha mma JoyPads maka PC
Site na ịhọrọ otu ọrụ igwe ojii na-egosi n'elu, anyị ga-enwe ike igwu egwu na ntanetị na-enweghị njikwa na enweghị ịtọlite ​​PC egwuregwu (dị oke ọnụ), kwụọ ụgwọ ego kwa ọnwa, ma ọ bụ zụta ụfọdụ aha maka nchịkọta onwe anyị. (na Google Stadia). Servicesfọdụ ọrụ nwekwara n'efu, ma nwee oge na njedebe bandwidth, yabụ na ọ gaghị ekwe omume mgbe niile igwu egwu dịka ị hụrụ na ọrụ akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na njikọ Internetntanetị anyị nye ya ohere, ka anyị nye egwuregwu ojii igwe ojii nwalee, ebe ọ bụ na ugbu a sava na njikọ ejiri mee ihe tozuru oke iji nwee ike ịmegharị ahụmịhe egwuregwu niile n'ịntanetị, na-ezere nsogbu niile metụtara ihe ochie (kaadị vidiyo anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ PC arụmọrụ adịghị mma).
Ọ bụrụ na anyị nwere mmasị na egwuregwu vidio, egbula ndepụta nke egwuregwu kacha mma n'efu 60 maka PC.
Esi lelee Disney + na TV
Otu esi eme pikselụ nka site na PC, smartphones na tablet
Etu esi tinye kaadi na Google Play na Apple Store
Ngwa nzuzo kacha mma
Egwuregwu ụwa kacha mma maka gam akporo na iPhone
Etu esi ejikwa ọsọ nke egwuregwu na PC
Esi gbanyụọ ihe mmetụta niile na ama gị
Ejiji kachasị mma na egwuregwu ejiji maka gam akporo na iPhone
Etu esi eji eGPU na MacBook iji melite arụmọrụ 3D
Etu esi gbanyụọ ndenye aha na gam akporo, iPhone, iPad na Windows 10
Ihe ndi ozo di nma na ngwa Google